Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic kweLiposomal Omega-3 Fatty Acids - Hielscher Ultrasound Technology
AmaNanoliposomes yizithwali zezidakamizwa ezisebenza kahle ezisetshenziselwa ukuthuthukisa i-bioavailability yezakhi ze-bioactive ezinjenge-omega-2 fatty acids, amavithamini nezinye izinto. Ukuvalwa kwe-Ultrasonic kwezakhi ezixubile kuyindlela esheshayo nelula yokulungiselela ama-nanoliposomes anemithwalo ephezulu yezidakamizwa. Ukubethelwa kwe-Ultrasonic kuma-liposomes kuthuthukisa ukuqina kwamakhompiyutha kanye ne-bioavailability.
Ama-acid e-Omega-3 acids anjenge-eicosapentaenoic acid (EPA) ne-docosahexaenoic acid (DHA) adlala indima ebalulekile ekusebenzeni okufanelekile kokuphendula okuningi okubalulekile emzimbeni womuntu. I-EPA ne-DHA zitholakala kakhulu kwinhlanzi enamanzi abandayo, isibindi se-cod kanye nezinhlanzi zegobolondo. Njengoba kungewona wonke umuntu odla izinhlanzi ezimbili ezinconyiwe ngesonto, uwoyela wezinhlanzi uvame ukusetshenziswa ngendlela yezithako zokudla. Ngaphezu kwalokho, ama-omega-3 acid acid anjenge-EPA ne-DHA asetshenziswa njengezokwelapha ekwelapheni izifo zenhliziyo nobuchopho kanye nasekwelashweni komdlavuza. Ukuze uthuthukise inani le-bioavailability kanye nethuba lokufakwa, ukufakwa kwe-ultrasonic kuma-liposomes kuyindlela esetshenziswa kabanzi futhi ngempumelelo.
I-Ultrasonic Encapsulation ye-Omega-3 Fatty Acids ibe yiLiposomes
I-encapsulation ye-Ultrasonic iyindlela yokuthembela yokulungiselela ukwakha ama-liposomes anomthwalo omkhulu wezinto ezisebenzayo. I-Ultrasonic nano-emulsation iphazamisa ama-bilayers we-phospholipid futhi ingenise amandla okukhuthaza umhlangano wama-vesicle we-amphiphilic wesakhiwo esiyindilinga, owaziwa ngokuthi yi-liposomes.
I-Ultrasonication ivumela ukulawula usayizi we-liposome inqubo yokulungiselela ye-ultrasonic: Usayizi we-liposome uyancipha ngamandla akhulayo we-ultrasound. Ama-liposomes amancane anikela nge-bioaccessibility ephezulu futhi angahambisa ama-molecule wamafutha ashukela ngesilinganiso sempumelelo ephakeme kumasayithi okuhlosiwe ngoba usayizi omncane asiza ukuvama kokuthola ama-membranes weseli.
AmaLiposomes aziwa njengezithwali zezidakamizwa ezinamandla, ezingalayishwa nge-lipophilic kanye nezinto ze-hydrophilic ngenxa yesakhiwo se-amphiphilic samabhilayitha ayo. Enye inzuzo ye-liposomes yikhono lokuguqula amakhemikhali ngamakhemikhali ngokufaka ama-polid-bonded-polymers ukuba enze ukwakhiwa, ukuze ukuthathwa kwamangqamuzana afakwe ezicutshini eziqondisiwe kuyothuthukiswa kanye nokukhishwa kwezidakamizwa futhi ngaleyo ndlela isikhathi sawo sokuphila isikhathi eside. Ukugoqwa kwe-liposomal kuvikela amakhompiyutha e-bioactive futhi nokulwa nokuwohloka kwe-oxidative, okuyisici esibalulekile sama-fatty acid acids afana ne-EPA ne-DHA, athambekele ku-oxidation.
Hadia et al. (2014) ithole ukuthi ukubethelwa kwe-ultrasonic kwe-DHA ne-EPA kusetshenziswa i-probe-hlobo ultrasonicator UP200S unikeze ukusebenza kahle kokuguquguquka kokusebenza (% EE) nge-56.9 ± 5.2% ye-DHA ne-38.6 ± 1.8% ye-EPA. I-% EE ye-DHA ne-EPA yama-liposomes ikhuphuke kakhulu isebenzisa i-ultrasonication (P inani elincane kune-0.05; amanani abalulekile
I-liposomes elungiselelwe i-ultrasonically elayishwe ngama-DHA ne-EPA fatty acids.
Isifundo nesithombe: Hadian et al. 2014
Ukuqhathaniswa Kusebenze: I-Ultrasonic Encapsulation vs Liposome Extrusion
Ukuqhathanisa ukubethelwa kwe-probe-hlobo kwe-ultrasonic nge-bath sonication ne-extrusion inqubo, ukwakheka kwe-liposome ephakeme kutholakala nge-probe-sonication.
Hadia et al. (2014) qhathanisa nokuphenya nge-sonication (UP200S), i-sonication yokugeza, ne-extrusion zinjengamasu wokulungiselela ama-liposomes we-fish e-omega-3. AmaLiposomes alungiswa yi-sonication yohlobo lokuphenya ayeyindilinga ngesimo futhi agcina ubuqotho obuphezulu bezakhiwo. Ucwaningo luphethe ngokuthi i-probe-hlobo sonication of liposomes eyakhiwe ngaphambili isiza ukulungiselela ukulungiswa kwe-DHA elayishwe kakhulu ne-EPA liposomes. Ngokubizwa ngohlobo lokuphenya, i-omega-3 fatty acids DHA ne-EPA zifakwe emzimbeni we-nanoliposomal membrane. Ukugoqeka kwenza ama-acids e-omega-3 aqukethe kakhulu i-bioava futhi kuyawagcina ekuwohlokeni kwe-oxidative.
Izici ezibalulekile zeLiposomes ezisezingeni eliphakeme
Ngemuva kokulungiswa kwe-liposome, ukuzinza kanye nokugcinwa kwezakhi ze-liposomal kudlala indima ebalulekile ukuze kutholakale ukwakheka kwesikhathi eside nokuzinza okunamandla.
Izici ezibucayi ezithinta ukuqina kwama-liposomes zifaka inani le-pH, izinga lokushisa lokugcina, nezinto zokugcina iziqukathi.
Okokwakhiwa okuqedile inani le-pH le-approx. I-6.5 ibhekwa njengefanelekile, ngoba ku-pH 6.5 lipid hydrolysis iyancishiswa ngesilinganiso sayo esiphansi.
Njengoba ama-liposomes angakhulisa futhi alahlekelwe umthwalo wawo wento oboshiwe, izinga lokushisa liseduze. Kunconywa u-2-8 ° C. Ama-liposomes athwale akumele abekwe ngaphansi kwezimo zokubandisa futhi ancibilike njengoba ukucindezela kweqhwa - thaw kukhuthaza ukuvuza kwezihlanganisi ezihlanganisiwe ze-bioactive.
Ukuvalwa kwesitsha sokugcina nokuvalwa kwesitsha sokugcina kufanele kukhethwe ngokucophelela, ngoba ama-liposomes awahambelani nezinto ezithile zepulasitiki. Ukuvimbela ukonakaliswa kwe-liposome, ukumiswa kwe-liposome okujova kufanele kugcinwe kuma-ampoules engilazi kunokuba kuhambelana nezilimo zokujova ezivinjelwe. Ukuvumelana nokuvinjwa kwama-elastomer ama-vials omjovo kufanele kuhlolwe. Ukugwema i-photooxidation yezinhlanganisela ze-lipid, isitoreji esivikelwe ukukhanya, isib ngokusebenzisa ibhodlela lengilazi emnyama nokugcina endaweni emnyama, kubaluleke kakhulu. Ukuze kwakheke i-liposome engabonakali, ukuqinisekiswa kokumiswa kwe-liposome ne-tubing ye-intravenous (okwenziwe ngeplastiki yokwenziwa) kumele kuqinisekiswe. Ukugcina nokuhambisana nezinto kufanele kuchazwe kwilebula yokuqanjwa kwe-liposome. [cf. I-Kulkarni ne-Shaw, 2016]
I-Ultrasonicators ephezulu yokusebenza kwe-Liposomal formulations
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'ziyimishini ethembekile esetshenziswa ekwenziweni kwemithi nokwengezelela ukwakha ama-liposomes asezingeni eliphakeme alayishwe ngamafutha acid, amavithamini, ama-antioxidants, ama-peptides, ama-polyphenols nezinye izinhlanganisela ze-bioactive. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, abakwaHielscher bahlinzeka ngama-ultrasonicators avela kuma-compact hand-hand lab homogeniser nama-bench-top ultarsonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu we-liposomal form form. Ukwakheka kwe-liposome ye-Ultrasonic kungaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo yolayini. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes (i-phenes) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okulungile komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
I-liposome iyi-vesicle eyindilinga enobubanzi okungenani be-lipid. AmaLiposomes aziwa kakhulu njengezithwali zezidakamizwa futhi asetshenziswa njengemoto ukuphatha izakhamzimba, izithasiselo nezidakamizwa zemithi kwezicubu ezihlosiwe.
AmaLiposomes avame ukwenziwa kuma-phospholipids, ikakhulukazi i-phosphatidylcholine, kodwa angafaka namanye ama-lipids, anjenge-phosphatidylethanolamine ye-egg, inqobo nje uma ahambelana nesakhiwo se-lipid bilayer.
I-liposome iqukethe umnyombo wamanzi, ozungezwe i-membropane ye-hydrophobic, ngendlela ye-lipid bilayer; imishini ye-hydrophilic encibilikisiwe enkabeni iboshwe futhi ayikwazi ukudlula kalula ku-bilayer. Ama-molecule we-Hydrophobic angagcinwa ku-bilayer. I-liposome ingalayishwa ngama-molecule we-hydrophobic kanye / noma we-hydrophilic. Ukuhambisa ama-molecule esakhiweni esikhokhelwayo, i-lipid bilayer ingakwazi ukuhlangana namanye ama-bilayers anjenge-membrane yeseli, ikhiphe izinto ezihlanganiswe kwi-liposome kumaseli.
Njengoba ukugeleza kwegazi kwezilwane ezincelisayo kususelwa emanzini, ama-liposomes athuthela i-hydrophobic ntho kahle emzimbeni ukuya kumaseli aqondiwe Ngakho-ke amaLiposomes asetshenziselwa ukwandisa i-bioavailability yamangqamuzana angenakungena manzi (isib. CBD, curcumin, molecule wezidakamizwa).
AmaLiposomes alungiswa ngempumelelo yi-nano-emulsation ye-ultrasonic kanye nokubethelwa.
I-Omega-3 Fatty Acids
I-Omega-3 (ω-3) ne-omega-6 (ω-6) okunamafutha acid zombili zombili ama-polyunsaturated fatty acids (PUFA) futhi zinomthelela emisebenzini eminingi emzimbeni womuntu. Ikakhulu i-omega-3 fatty acids iyaziwa ngezimpawu zayo zokulwa nokuvuvukala nezempilo.
I-Eicosapentaenoic acid noma i-EPA (20: 5n-3) isebenza njenge-preursor ye-prostaglandin-3 (evimbela ukuhlanganiswa kweplatelet), i-thromboxane-3, ne-leukotriene-5 eicosanoids futhi idlala indima ebaluleke kakhulu empilweni yenhliziyo nengqondo.
I-Docosahexaenoic acid noma i-DHA (22: 6n-3) isakhi esiyingxenye enkulu yesistimu ye-mammary central nervous system. I-DHA yi-omega − enamafutha kakhulu e-3 ebuchosheni nase-retina nakuzo zombili izitho zomzimba, ubuchopho kanye ne-retina kuncike ekudleni kokudla kwe-DHA ukuze isebenze kahle. I-DHA isekela uhla olubanzi lwe-membrane yamangqamuzana nezindawo ezisayina amaseli, ikakhulukazi endabeni engwevu yobuchopho kanye nasezingxenyeni ezingaphandle zamaseli we-retinal Photoreceptor, acebile ngezitho zokuhlobisa umzimba.
Imithombo Yokudla ye-Omega-3 Fatty Acids
Eminye yemithombo yokudla ka-ω-3 izinhlanzi (isb. Izinhlanzi ezinamanzi abandayo njenge-salmon, isardine, i-mackerel), uwoyela we-cod, i-shellfish, i-caviar, i-marine algae, uwoyela wasolwandle, ifilakisi (i-linseed), imbewu ye-hemp , nama-walnuts.
Ukudla okujwayelekile okungasentshonalanga kuvame ukufaka amanani aphezulu e-omega-6 (ω-6) acid, ngoba ukudla okufana okusanhlamvu, uwoyela wembewu yemifino, izinkukhu kanye namaqanda kucebile ngama-omega-6 lipids. Ngakolunye uhlangothi, i-omega-3 (ω-3) enamafutha, atholakala kakhulu ezinhlanzini zamanzi abandayo, adliwa ngamanani aphansi kakhulu, ukuze isilinganiso se-omega-3: omega-6 sivame ukungalingani ngokuphelele.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwezithako zokudla ze-omega-3 kuvame ukunconywa odokotela bezokwelapha nabasebenza kwezempilo.
Ama-Asid fatty Acids
Ama-acids abalulekile ama-acid (ama-EFAs) ngamafutha acashile okufanele abantu nezilwane badle ngokudla ngoba umzimba uwadinga ukuze usebenze kahle, kepha awunakukwazi ukuwahlanganisa. Ngokuvamile, ama-acid anamafutha abalulekile kanye nokuphuma kwawo kubaluleke kakhulu ebuchosheni nakuhlelo lwezinzwa, okubonisa u-15 %-30% wesisindo esomile sobuchopho. Ama-acids abalulekile e-fat ahlukaniswa kuma-acid e-saturated, unsaturated and polyunsaturated. Ebantwini, ama-acid amabili kuphela anama-asidi aziwa njengebalulekile, okuyi-alpha-linolenic acid, okuyi-omega-3 fatty acid, ne-linoleic acid, okuyi-omega-6 fatty acid. Kunamanye ama-acid amaningi, angahlukaniswa ngokuthi “ngombandela obalulekile”, okusho ukuthi zingabaluleka ngaphansi kwezimo ezithile zokuthuthuka noma zezifo; izibonelo zifaka i-docosahexaenoic acid, eyi-omega-3 fatty acid, ne-gamma-linolenic acid, i-omega-6 fatty acid.